Sidee loo hubiyaa in war-saxaafadeedkaaga ay akhriyaan bini-aadamka oo ayan ahayn aalado?
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Aviation » Sidee loo hubiyaa in war-saxaafadeedkaaga ay akhriyaan bini-aadamka oo ayan ahayn aalado?
Aviation • Wararka Jabinta Hawaii • News • War-Saxaafadeed • Technology • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Ma laguu yeerayaa markaad soo saareyso war-saxaafadeed? In kasta oo wakaaladda PR ay qortay warbixin wanaagsan oo warbaahin ah, haddana inta badan hay'adaha ayaa si fudud ugu dhaleeceeya sii deynta liiskeeda keydka macluumaadka warbaahinta, iyagoo rajeynaya daabacaad bilaash ah Tani waa waxa warshaduhu ugu yeeraan "Warbaahinta Heshay." Dhinaca kale, “Media Paid” waxay siisaa kuwa wareegaya sii deyntooda inay si buuxda gacanta ugu hayaan sumaddaada iyo farriintaada. eTurboNews wuxuu ku daray labo heer oo kale, waxayna ka dhigan tahay in lagu siiyo mushahar keliya guusha.
Wareejinta war-saxaafadeedyadu waa ganacsi weyn, laakiin daabacaadaha sida eTurboNews badiyaa kuma jiraan dhanka kasbashada lacagtan ganacsi samaynta,
Adeegyada waaweyn ee siligga qaybinta sida PR Newswire ayaa lacag lagu siiyaa si loogu sii daayo wararka la isla dhexmarayo, isla mar ahaantaana waxay ka qaadayaan khidmadaha ruqsad siinta daabacadaha muhiimka ah.
Marar badan war-saxaafadeedyadu waxay ku dhammaadaan bogagga dambe ee qarsoon ee bogagga sida Yahoo Maaliyadda, Joornaalka Ganacsiga, oo waxay soo saaraan warbixino cajaa'ib leh oo lagu qiyaasayo tirada akhristayaasha suurtogalka ah.
eTurboNews ayaa hadda hubinaysa, in akhristayaasha warsaxaafadeedyada ganacsiga ee lagu daabacay boggaga eTN ay dhab ahaantii yihiin bini-aadam ee ayan ahayn aalado.
Markaad falanqeyneyso warbixinnada qaybinta ee loogu talagalay war-saxaafadeedyada la soo dhejiyay qaar ka mid ah adeegyada siligga, qofku wuxuu heli karaa kombiyuutarro isla hadlaya. Shirkadda daabacaadda sii deynta badanaa waxay heshaa warbixinno leh tiro malyuun ah oo xoog leh marka dhab ahaantii dhowr boqol oo keliya ay arkeen sheekada lagu daabacay daabacaad sharci ah. In ka yar dad faro ku tiris ah ayaa furay oo akhriyay sii deynta, taas oo keentay in yar oo gujin ah oo ku saabsan xiriiriyeyaasha ku duugan nuxurka sii deynta.
Kharashka hal sii dayn ah wuxuu aadi karaa kumanaan iyadoo natiijo aad u yar ay jirto.
Warbaahinta la kasbaday waxaa loola jeedaa daabacadaha dhab ahaantii leh dhagaystayaasha la doonayo had iyo jeer waxay ku jiraan dhinaca aan kasban ee silsiladdan. Waxaa jira dhiirigelin aad u yar oo lagu daabaco war-saxaafadeed ay ku jiraan waxyaabaha xayeysiinta ah.
eTurboNews gaadho in ka badan 2 milyan oo shaqsi akhristayaal ah bil kasta oo lala yimaado guul / guul xal: Akhristayaasha aadanaha!
eTurboNews cusub Qorshayaasha Soo-deynta aan xadidnayn u xaqiiji macaamiisha inay dacwad ku soo oogaan oo keliya marka akhristaha runti uu dhiirrigeliyo ku filan inuu furo war-saxaafadeedka, akhriyo oo uu gujiyo xiriir uu isagu xiiseynayo. Iskuxirayaasha badankood waxay aadaan websaydhada shirkadda dirista.
Mar alla markii akhristaha uu gujiyo xiriiriyaha noocan oo kale ah, waxaa jiri doona lacag u dhaxeysa 15 senti ilaa $ 1.50 guji kasta, iyadoo kuxiran qorshaha. Kharashka ugu badan waligiis kama badnaan doono 1000 guji marka la sii daayo.
Danta ayaa ku jirta eTurboNews si aad u dejiso sii deynta ganacsiga si wanaagsan, ugu falanqayso ereyada muhiimka ah iyo cinwaannada xiisaha leh, oo u dhig mawjadaha raadinta, wararka APPS, iyo adeegyada wararka isu-geynta, sida Google News.
War-saxaafadeed kasta waxaa lagu dari doonaa joornaalada caalamiga ah ee abaalmarinta ku guuleysta eTN. In ka badan 1/2 milyan oo akhristayaal ah ayaa heli doona ogeysiis riix ah oo ku saabsan kumbuyuutarradooda kumbuyuutarka oo muujinaya cinwaanka sii deynta oo leh xiriir sheekada ah.
War-saxaafadeed lagu dhejiyay eTurboNews waxaa loo rogaa feyl maqal ah oo lagu dhajiyo eTurboNews. Waxaa sidoo kale loo rogi doonaa Podcast ah.
Podcasts waxaa loo beddelay a Fiidiyow toos ah iyo lagu dhajiyay in ka badan 16 dhufto, oo ay ku jiraan YOUTUBE, APPLE, Soundcloud, Anchor, Google, iwm.
Siideynta waxaa loo tarjumi doonaa in ka badan 50 luqadood waxaana lagu dari doonaa eTN-yada cusub, madaxbanaan, iyo heelanaanta boggaga wararka ee luuqadaha shisheeye.
Waxaas oo dhan waxaa sameeya aadanaha oo daneeya in bini aadam badan oo adduunka ku nool lagu dhiirrigeliyo inay wax akhriyaan oo ay la falgalaan waxa ku jira warsaxaafadeedka.
Xubnahaasi waxay ka mid noqdeen qorshooyinka rukunka aan xadidneyn waxay helaan tixgelinta mudnaanta si loogu xuso sheekooyinka soo socda ee soo socda. Xubnaha noocan oo kale ah ayaa sidoo kale lagu casuumay wareysiyo ku saabsan baahinta wararka eTV ee maalinlaha ah, ama kaqeybgale ama marti ka ah doodaha soo socda ee Livestream.
Xubnaha Qorshayaasha Diiwaangelinta Diiwaangelinta Mawduucyada Aan Xaddidnayn waxay sidoo kale helayaan xubinimo bilaash ah Shabakada Dalxiiska Adduunka (WTN).
Macluumaad dheeraad ah: www.travelnewsgroup.com/unlimited
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan war-saxaafadeedka aadanaha